Umgangatho - I-Ocean-Components.com
Siphanda ngokufanelekileyo isiqinisekiso sokuthenga ngetyala, ukulawula umgangatho ukususela ekuqaleni. Sineqela lethu le-QC, elinokujonga kwaye lilawule umgangatho xa yonke le nkqubo ibandakanya ukuza, ukugcina, ukuhambisa kunye nazo zonke izinto ngaphambi kokuba kuthunyelwe kudluliselwe kwiCandelo lethu le-QC, sinikezela ngewaranti yonyaka o-1 kuwo onke amacandelo esiwanikileyo.
Uvavanyo lwethu lubandakanya:
Ukwahlulwa kwesiqinisekiso sokuFa
Ukusetyenziswa kwemikroskopu ye-stereoscopic, imbonakalo yecandelo lama-360 ° ujikelezo lomjikelo. Ukujongwa kwemeko yokujonga kubandakanya ukubandakanywa kwemveliso; uhlobo lwe-chip, umhla, ibatch; Ukushicilela kunye nokupakisha ilizwe; ilungiselelo lephini, ikoplanar kunye nokubekwa kwetyala kunye nokunye.
Ukuhlolwa okubukwayo kunokusiqonda ngokukhawuleza isidingo sokuhlangabezana neemfuno zangaphandle zabavelisi bohlobo lwentengiso, imigangatho yokulwa kunye nokufuma kunye nokuba isetyenzisiwe okanye ihlaziyiwe.
Yonke imisebenzi kunye neparamitha ezivavanyiweyo, zibizwa ngokuba luvavanyo olupheleleyo lomsebenzi, ngokweenkcukacha zoqobo, inqaku lesicelo, okanye indawo yesicelo somxhasi, ukusebenza ngokupheleleyo kwezixhobo ezivavanyiweyo, kubandakanya neparamitha yovavanyo, kodwa ayibandakanyi inxalenye yeparamitha ye-AC. Uhlalutyo kunye nokuqinisekisa indawo yovavanyo olungabuninzi kuninzi lwemida.
Uvavanyo lwe-X-ray, umkhondo wezinto ezingaphakathi ku-360 ° ujonge yonke indawo, ukubona imeko yangaphakathi kwamanqaku aphantsi kovavanyo kunye nenqanaba lonxibelelwano, ungabona inani elikhulu leesampulu eziphantsi kovavanyo ziyafana, okanye umxube (Umxube-Up) iingxaki ziyavela; Ukongeza banazo iinkcazo (kwiDatasheet) enye nenye kunokuqonda ukuchaneka kwesampulu yovavanyo. Imeko yoqhagamshelo lwephakheji yovavanyo, ukufunda malunga ne-chip kunye nokuqhagamshelwa kwephakeji phakathi kwezikhonkwane kuyinto eqhelekileyo, ukubeka isitshixo kunye ne-wire-open short-circuated.
Le ayisiyiyo indlela yokufumana ubungqina bokuba ngumgunyathi njengoko usenzeka ngokwendalo; nangona kunjalo, ngumba obaluleke kakhulu ekusebenzeni kwaye uxhaphake kakhulu kubushushu obufumileyo, obufumileyo obunje nge-Southeast Asia kunye namazwe asemazantsi eNyakatho Melika. Inqanaba elidibeneyo lomgangatho J-STD-002 lichaza iindlela zovavanyo kunye nokwamkela / ukwala iikhrayitheriya zomngxuma, umphezulu womphezulu, kunye nezixhobo ze-BGA. Kwizixhobo ezingezizo ze-BGA kumphezulu womhlaba, idip-and-jonga isetyenzisiwe kwaye "uvavanyo lweplanti yeceramic" yezixhobo ze-BGA kutsha nje lubandakanyiwe kwisistim yethu yeenkonzo. Izixhobo eziziswa kupakelo olungalunganga, ukupakisha okwamkelekileyo kodwa zingaphezulu konyaka, okanye zibonise ungcoliseko kwizikhonkwane kuyacetyiswa ukuba kwenziwe uvavanyo lwe-solderability.
Uvavanyo olonakalisayo olususa izinto zokufakelwa zecandelo ukuveza ukufa. Ukufa emva koko kuyahlalutywa ngenjongo yokumakishwa kunye nolwakhiwo ukuze kufunyanwe ukulandelwa nokunyaniseka kwesixhobo. Amandla e-Magnification afikelela kwi-1 000x ayimfuneko ukubonisa uphawu lokufa kunye nokuhluka komphezulu.